ट्रक दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु – Sanjal Nepal
Homeसमाचारट्रक दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
ट्रक दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
December 16, 2020 admin समाचार 1920
महाकाली राजमार्गअन्तर्गत गोकुलेश्वर–दार्चुला सडकखण्डको मालिकार्जुन गाउँपालिका–१ भर्तोलामा गए राति ट्रक दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।मृत्यु हुनेमा ट्रक चालक बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–५ न्वालीका २४ वर्षीय शेरसिंह कार्की रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले जानकारी दिए । मृतक अन्य दुईको पहिचान हुन सकेको छैन । उनीहरु सबैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो गोकुलेश्वरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको ना ३ ख ३४८५ नम्बरको ट्रक गए राति सवा १० बजे दुर्घटनामा परेको हो । ट्रक सडकबाट झण्डै १२० मिटर तल खसेको छ । ट्रकमा सवार तीनै जनाको मृत्यु भएकाले दुुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकहरूको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ ।
घरमा हुने यी ५ दो’षका कारण टिक्दैन साथमा पैसा, कतै तपाईको घरमा पनि छ की ?
७० बर्ष पुरानो नेपालको दुर्लभ फोटो र भिडियोहरु अहिले हेर्दा अचम्म लाग्छ !!
January 1, 2021 admin समाचार 2143
काठमाण्डौ । गरे के हुँदैन र ? भन्ने उखानलाई मेरी बास्सैका बान्द्रेले साबित गरिदिएका छन् । बान्द्रेलाई नचिन्ने सायदै होलान् । उनै हास्य कलाकार बान्द्रे यतिबेला बट्टै तथा टर्कीको व्यावसाय गरिरहेका छन् । उनले यो
महानायक राजेश हमाल र मोडल दुर्गेश थापा एकसाथ, बन्यो यस्तो भिडियो (भिडियो सहित)
November 21, 2020 admin समाचार 5047
प्रायः विवादमा तानिइ’रहने गायक तथा मोडल दुर्गेश थापासंग महानायक राजेश हमालले म्युजिक भिडियो खेलेका छन् । लकडाउन यता राजेश’को उपस्थिति म्युजिक भिडि&योमा बाक्लिदो छ । केही समयअघि आफुले खेल्ने एक भिडियोमा राजेशले विवा’दमा नपरेको नायिका
साह्रै दुखद खबर : कुर्सीबाट ल’डे’र गाउँपालिका अध्यक्षको मृ’त्यु !
November 22, 2020 admin समाचार 2647
तुलसीपुर । दाङमा कुर्सीबाट ल’डेर पूर्वगाविस अध्यक्षको मृ’त्यु भएको छ । शनिबार साँझ ५ बजेतिर कुर्सीबाट ल’डेर ग’म्भी’र घा’इ’ते भएका तत्कालीन उरहरी गाविस अध्यक्ष रेशमबहादुर भण्डारीको उपचारका क्रममा राति ११ बजेतिर मृ’त्यु भएको हो ।